Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: HUBADHU LAMMIIKOO.!
1) Qawween bara kana ummanni keenya diina ittiin raasee kuffisaa jiru madaafa guddaa maqaan isaa TOKKUMMAA jedhamuudha.
2) Ummanni keenya kutaa garagaraa keessatti diinaan yeroo roorrifamanitti kanneen kutaalee biroo jiran iyyanii wolirratti tumsuun isaanii SABBOONUMMAA Jedhama.
3) Qabsoo bara kanaa keessatti yeroo diinni dararaa ummata keenyarratti daangaa dabrse sabaaf aaranii dhalli oromoodhaa diina wojji hojjachaa jiran sabaaf jecha diinatti garagalanii loluudhaan ajjeesuuniifi woreegamuun isaanii AANTUMMAA Jedhama.
4] Qabsaayonni qabsoo keessatti dararaan diinaa irra gahee lubbuun baraaraman jiiluu dhabanii gara qabsootti lammata deebi'anii diina raasuun isaanii MURANNOO YKN CICHOOMINA Jedhama.
5] Ummanni keenya osoo diinni hidhannoo qabu hundaafi tooftaa qabu hundaan fixaa jiruu du'a sodaa didanii diina dura dhaabbatanii haqaaf falmachuun isaanii ammoo GOOTUMMAA Jedhama.
6) Shira qabsoo sakaaluuf diinni nurratti baasu hunda ummanni irratti dammaquufi hayyoota tarsiimoo bareeda baasan dhaggeeffachaa qabsoo dila kana duratti oofuun isaa ABSHAALUMMAA YKN DAMMAQIINSA Jedhama.
7) Namoonni jiruu mataa isaanii bayeessa osoo ooffataa jiranii dhiigni ummata isaanii isaan mararuudhaan jiruu isaanii gatanii alaafi keessatti dhimma sabaa irratti hojjachaa jiran kan jiruu isaan jibbisiisee qabsootti isaan make JAALALA SABAA YKN QUUQAMA SABAA Jedhama.
8) Dandeettiin shira diinaa fagootti hubatanii ufirraa eeguufi sabarraa eeguudhaa ammoo XIINXALLA YKN HUBANNOO Gaarii jedhama.
9) Dandeettiin shira diinaatiin sabaafi sab-lammiin akka wolitti hin buune madaala adeemsaa eegaatiin sochii qabsichaa gadi fageenyaa too'achaa hoogganuudhaan duratti deemuudhaa ammoo HAYYUMMAA Jedhama.
10) Diina sodaa dhabanii fira sodaachuufi kabajuun ammoo HAYYUMMAA fi jaalala sabaa ti.
Wolumaa galatti sabni keenya
Quuqama sabaa ykn
Xiinxalla gaarii ykn
Hayyummaaf gaarommina ni qaba jechuun bara kana haala wol nama hin mirmisiifne tokkoon mirkanaayee jira.
Duuba saba akka oromootti ulaagaalee kana hunda guuteefi haqa isaatiif rabbi gargaarsifachaa falmatu kana injifannoo gonfatee ,haqa isaas deeffatee, bilisoomee, gumaa woreegamtoota isaas baafachuun shakkii ni qabaa?
Ani gama kiyyaan shakkii takkallee hin qabuutii ni bilisoomnaatu natti muldhate.! Isin hoo maal jettuu?
Mee gama hundaan ilaallee qabsoo keessa jirru kana madaaluudhaan
sobaan wol jajjabeessuu qofa osoo hin taane haqa jirtu madaallee hamilee wolitti horuudhaan qabsoo finiinsinee yeroo gabaabduutti diina raafame kana ufirraa buqqisnee haa darbinuutii qabsoo finiinsaa roga hundaan jechuu barbaadeeti. Horaa bulaa.!
Haqa qabnaatii ni moona.!
Oromiyaan ni bilisoomti.!